Umthetho Wezindlu Nezindawo | Law & More | I-Eindhoven ne-Amsterdam
Umthetho wezindawo zokuhlala uqukethe zonke izici zomthetho eziphathelene nempahla engashukumi. Si- Law & More bayakwazi ukukusiza ngezeluleko zomthetho lapho kuphakama imibuzo noma izingxabano maqondana nokuthengwa nokuthengiswa kwempahla engasuki. Ngaphezu kwalokho singakunikeza izeluleko zomthetho mayelana nezinkundla zomthetho wokwakha nomthetho wokuqasha.
KUDINGA UKUQONDA KOMTHETHO WEMITHETHO YOKUQALA?
BUKA NGOMUNYE WEMITHETHO YAMALUNGA WEMALI
> Umthetho wokwakha
> Umthetho wokuqasha
> Ukuthengwa kwendawo yokuhlala yebhizinisi
> Isimo sengqondo esingenangqondo
Njengosomabhizinisi ngaphakathi emkhakheni wezokwakha ubambisana namaqembu amaningi ahlukahlukene. Othishanhloko, abaklami bezakhiwo nosonkontileka kufanele benze ukuqokwa okucacile, ngoba imisebenzi yalelo nalelo qembu ihlangene kakhulu. Ngenxa yobuningi bokubambisana phakathi kwenqubo yokwakha, iqembu ngalinye liboshelwe izibopho eziningi kanye namalungelo abekwe phansi komthetho. Ngenxa yobunzima bokusebenzisana, zonke izinhlobo zezinkinga zomthetho zingavela. Yini izibopho zakho namalungelo akho kwelinye iqembu? Ubani ongaboshwa uma kwenzeka alimala ngenxa yephutha elihlelekile. Law & More inamandla okukunikeza izeluleko zomthetho futhi ingashona uma kuphakama kunesidingo.
Ngaphezu kwalokho, singakweluleka ngayo yonke imithetho yezomthetho okufanele ukwakhiwa kuhambisane nayo. Ngale ndlela izinkinga zomthetho, mayelana nesibopho sesibonelo, zingavinjelwa ngangokunokwenzeka.
Kungekudala, singakunikeza, phakathi kwezinye izinto, ngezenzo ezilandelayo:
• Ukunqunywa kwamalungelo akho nezibopho zakho njengomdlali ovumayo ngaphakathi kwenqubo yokuhleleka;
• Yeluleka ngemibandela nemibandela umakhiwo okufanele uhambisane nawo;
• Usizo uma kwenzeka unecala.
Law & More isiza abaqashi kanye nabanini bomhlaba ekuvikeleni nasekuxazululeni izinkinga zomthetho. Abaqashi kanye nabanini bomhlaba banezibopho ezikhethekile zomthetho. Lokhu kuqukethe umlingiswa olawulayo okusho ukuthi amaqembu angazifaka esikhundleni sawo ngezivumelwano zawo. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlinzeko eziphoqelekile ngaphakathi komthetho wokuqasha. Umuntu angeke ahluke kule mithetho, ebeka phambili ukuhlose ukuvikela umqashi njengoba kuyiqembu elibuthakathaka, ngesivumelwano. Uma ubekwe esimweni lapho umlingani wakho angahambisani nezivumelwano zakhe, kunezenzo eziningana ezingazama. Ezimweni ezinjalo ungasethemba ukuthi uzokunikeza ngezeluleko zomthetho ozidingayo.
• Ukubhalwa kwesivumelwano sokuqasha uma ungumnikazi womhlaba ;;
• Izimpikiswano ngokuchazwa kwesivumelwano;
• ukuthatha izinyathelo uma umqashi noma umnikazi womhlaba engasebenzi ngokulandela izivumelwano ezenziwe ;;
• ukunqanyulwa kwesivumelwano sokuqasha.
Ukuqashwa kwendawo yokuhlala yebhizinisi
Uma ufisa ukuqhuba ibhizinisi uzodinga isikhala sebhizinisi. Lapho unenhloso yokuqasha indawo yokuhlala yebhizinisi, kufanele kwenziwe isivumelwano sokuqasha. Kunemithetho ethile yezomthetho yokuqashwa kwebhizinisi lokuhlala. Esingakusiza ngakho ukulandelayo
• nquma izinhlobo zezivumelwano zokuqasha kanye namalungelo nezibopho ezihambisanayo;
• ukweluleka uma kungashintshwa ukuguqulwa kwentengo;
• ukweluleka ngokuvikelwa kwe-clearance.
Ingabe ukhangwa isakhiwo esihle? Uma kwenzeka ufuna ukuqasha lesi sakhiwo kuyadingeka ukwazi ukuthi imisebenzi ohlose ukuyenza… iyahambisana yini nokuhle okwenziwe umasipala akhulume ngakho esakhiweni. Law & More isebenzisa ulwazi lwezinhlelo zamazinga futhi uyakwazi ukubona ukuthi ngabe isikhala sikhona.
Ukuthengwa kwendawo yokuhlala yebhizinisi
Uma ngabe uhlose ukuthenga impahla yebhizinisi lakho noma usunayo, singakusiza ngezifundo ezilandelayo:
• izingxoxo zesivumelwano sokuthenga;
• Ukuchazwa kwesivumelwano;
• ukwephulwa kwesivumelwano ngumninindlu;
• imalimboleko kanye nezinhlaka zezezimali.
Mnu. UTom Meevis, ummeli ku- Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl